Banyere ojiji nke akụrụngwa | Ota Ward Cultural Promotion Association
Banyere ojiji nke akụrụngwa ọdịnala n'oge usoro nke ọma nke ọma na Tokyo (nzaghachi mberede n'ihi mgbasawanye ngwa ngwa nke ụdị Omicron)
Banyere ojiji nke akụrụngwa n'oge usoro nke ọma nke ọma na Tokyo, anyị na-arịọ ụfọdụ mmachi na ịkpachara anya mgbe anyị na-eji ya iji gbochie mgbasawanye nke ọrịa coronavirus ọhụrụ.N'okpuru ọnọdụ ndị dị otú ahụ, n'ihi mgbasawanye ngwa ngwa nke mbak Omicron, a ga-agbanwe ụfọdụ mmachi dabere na amụma Tokyo na Ota Ward.
Anyị ga-achọ ịjụ ndị ọrụ niile ka ha nọgide na-nghọta na imekọ ihe ọnụ na-egbochi mgbasa nke ọhụrụ coronavirus ọrịa.
Biko mara na enwere ike igbochi ojiji nke akụrụngwa dabere na ọnọdụ ọrịa n'ọdịnihu.
XNUMX. XNUMX.Ebumnuche, oge, wdg.　* Emelitere 1/12
Jenụarị XNUMX (Tuzdee), afọ anọ nke Reiwa- Mọnde, XNUMX Jenụarị, afọ anọ nke Reiwa.
Oge mmeghe nke ụlọ ọrụ ọ bụla
Ọ ga-aga n'ihu na-emeghe ka ọ gafechara Jenụwarị XNUMX (Tụzdee).
Enwere ụfọdụ mgbochi na ebumnuche ojiji."XNUMX. Mgbochi na arịrịọ dabere na ebumnuche nke iji"Biko jiri nyochaa ọnụ.
Nkwụghachi nke ụgwọ ụlọ ọrụ
Maka oge a, n'agbanyeghị ụdị eji eme ihe, ọ bụrụ na ị kagbuo ihe eji eme ihe iji gbochie mgbasa nke ọrịa na-efe efe, anyị ga-akwụghachi ego zuru ezu.Biko kpọtụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla maka nkọwa.
XNUMX.Mmachi na ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ
N'ụkpụrụ, mgbe emejuputa usoro nchịkwa ọrịa nke ọma dabere na arịrịọ gọọmentị mba na gọọmentị obodo Tokyo, n'ihe gbasara mmemme, ọ bụ ihe omume na-akwadosi ike ka ndị na-ege ntị, wdg na-ekwu okwu n'olu dara ụda ugboro ugboro ma na-aga n'ihu. , ọ ga-abụ n'ime XNUMX% naanị maka ihe omume ndị na-adịghị ewere usoro dị mkpa nke ọma.
XNUMX. XNUMX.Ntọala mgbochi ọrịa nrịanrịa
Anyị na-arịọ ndị nhazi niile na ndị ọbịa so na akụrụngwa na arụmọrụ iji kwado usoro mgbochi mgbochi ọrịa ndị a.
Dịka iwu n'ozuzu, na-eyi ihe mkpuchi mgbe niile nke ọma.
Wepu ogwu nke oma ma saa aka gi.
Gbalịa igbochi mkparịta ụka (etila mkpu) na ụkpụrụ ụkwara.
Hụ na anya dị n'etiti ha kwesịrị ekwesị.
Anyị ga-agbasi mbọ ike maka ikuku.
Maka iri nri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ n'ime ụlọ (ewezuga ụlọ ndị a machibidoro iri nri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ na mbụ), ọ ga-ekwe omume iri nri ehihie wdg obere oge mgbe ịmechara iri nri nkịtị ma hụ na ikuku ikuku.
Anyị ga-arụsi ọrụ ike iji ngwa nkwenye kọntaktị (COCOA) nke Ministry of Health, Labour and Welfare.
Anyị ga-akwado mmụba nke okpomọkụ ma mee ihe dịka ichere n'ụlọ ma ọ bụrụ na ịnwere oke ọkụ (*) ma ọ bụrụ na ịnwere nke ọ bụla n'ime ihe mgbaàmà ndị a.
* Ihe atụ nke njirisi maka "mgbe enwere okpomọkụ dị elu karịa okpomọkụ nkịtị" …… Mgbe enwere okpomọkụ nke 37.5 Celsius C ma ọ bụ karịa
XNUMX.Mmachibido na arịrịọ dabere na nzube nke iji
N'ihe banyere ebumnuche ojiji ndị a, a ga-egbochi ma ọ bụ kagbuo ojiji maka oge ahụ.
Na mgbakwunye, anyị na-ezube ikpebi ibuli mmachi ahụ dabere na ọnọdụ ga-eme n'ọdịnihu dị ka ọganihu nke okporo ụzọ.
A) Iri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ
Ọ dị mma iri nri ehihie n'ụlọ ezumezu (ewezuga ụlọ ndị amachibidoro iri ihe na ị drinkụ mmanya na mbụ), mana biko kpachara anya maka isi ihe ndị a.
Biko hụ na ikuku ikuku.
Biko nọdụ n'ụdị ihu na ihu.
Biko chekwaa ogologo kwesịrị ekwesị n'etiti ndị ọrụ.
Biko zere ịkọ nri na efere n'etiti ndị ọrụ.
Biko zere oké mkparịta ụka n'oge nri.
N'ime ụlọ ebe ị nwere ike iri nri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ, biko mee ihe ndị a.
Banyere iri na ị drinkụ mmanya (gụnyere ị drinkingụ mmanya) n'ụlọ ọrụ n'oge usoro ndị bụ isi nke oge
B) Jiri nke chọrọ nlebara anya pụrụ iche
Mgbe ị na-eji maka ebumnuche ndị a, biko kpachara anya maka ịchekwa ebe dị anya.
Mahjong, Gaa, Shogi
Omume egwu (egwu egwu)
Omume egwu (olu olu)
Abụ Shigin / folk
Egwú ndị ọzọ (hula agba)
Egwuregwu egwu (egwu aerobic, jazz, wdg)
Ihe gbasara okwu
Biko zere ihu na ihu na mkparịta ụka dị nso dị ka o kwere mee.
Wepụta mkpịsị aka gị maka egwuregwu ọ bụla.
Mgbe disinfecting ngwaọrụ (iberibe, na-aga nkume, mbadamba, mahjong taịl nile, osisi, wdg).
Omume egwu-yoga wdg.
Ọ bụrụ na mmega ahụ na-akpata iku ume, dokwuo anya.
Biko kpachara anya ka ị zere ịkpọtụrụ oke n'etiti ndị ọrụ.
Zere ịkpọ ụda ihu na ihu na ịbụ abụ.
Anyị ga -akwụsị iji karaoke nwa oge iji gbochie ibute ọrịa coronavirus ọhụrụ.
XNUMX.Arịrịọ maka ojiji
Biko zere iji ma ọ bụrụ na ịnọ n’adịghị ike dịka ahụ ọkụ ma ọ bụ ụkwara.
Biko debe ikike nke ụlọ ahụ
(N'ihe banyere ihe omume ndị na-ada ụda (egwu egwu, ihe egwuregwu, wdg), ike kachasị bụ XNUMX%.
Biko debe ogologo kwesịrị ekwesị n'etiti ndị ọrụ.
Biko nyere anyị aka ịsa aka gị mgbe ị na-abanye ma na-apụ, ma mejuputa ụkpụrụ ụkwara.
Biko yiri nkpuchi.Biko zere ịbanye na ụlọ ngosi ihe nka ma ọ bụrụ na i yighi ya (biko jụọ ndị ọrụ)
Mgbe ị na-eri nri ma na-aṅụ ihe ọṅụṅụ n'ime ụlọ nzukọ (ewezuga ụlọ ebe a machibidoro iri nri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ na mbụ), ọ dị mma iri nri ehihie wdg obere oge mgbe ịmechara iri ihe na-agbachi nkịtị ma hụ na ikuku ikuku.
Na-agbanye ikuku mgbe niile mgbe ị na-eji ebe a (ihe dị ka nkeji 10 kwa elekere)
Biko zere iji ya ogologo oge na oghere a na-ekerịta (oghere n'ọnụ ụlọ wdg)
Biko buru ihe mkpofu gị n'ụlọ
Ọ bụrụ na ị mepụta ọrịa coronavirus ọhụrụ n'ime izu 2 ka ị jiri ya, biko kọọrọ ya onye njikwa ụlọ ọrụ ị na-eji ozugbo.
Maka nkọwapụta, biko lee akwụkwọ ọ bụla.
Arịrịọ maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ
Arịrịọ ka ndị nhazi
XNUMX.Banyere imeghe nke ebe ncheta　* Emelitere 7/9
Emeghewo ụlọ nzukọ ncheta ọ bụla na June XNUMXst (Tuesday) ma ga-aga n'ihu na-emeghe dị ka ọ dị na mbụ.
N'oge mmeghe, anyị ga-eme ihe ndị dị mkpa site n'echiche nke igbochi mgbasa nke ọrịa coronavirus ọhụrụ, dabere na ụkpụrụ ndị metụtara ya.
XNUMX.Banyere mkpakọrịta nkwado azụmahịa　* Emelitere 7/9
N'ime mmejuputa oru ngo a, anyi emeela ihe di nkpa site na uzo igbochi mgbasa nke oria ohuru ohuru.Maka nkọwa, biko lee ozi ozi arụmọrụ ọ bụla.
Anyị na-arịọ mgbaghara maka nsogbu ọ bụla na-ekele gị maka nghọta gị na imekọ ihe ọnụ.